Tracts - Fante - Life's Storm
Wiadze y mu dɛ yɛyɛ nyimpa aberbiara yetu enguan kɔ Ɔbra ehum nna atseetsee nna Osuro enyibɔ, nsɛɛe nna Ɔhaw mpoano. Sɛbɛtɛ ahyɛnsew wɔ iyinom nyinara, a bɔ hu nok war Kwan no, adzea Jesus Kasae a ɔfa banyinbi a osi ne dan wɔ abotan do. Ehum biara n’ekyir no entum enbu dan no mbom no mbom n’enyinara no ankorakor biara wɔ nokwar asetsena wɔ Nyame mu na ɔwɔ nokwar asetsena wɔ Nyame ho, dɛ nyimpa no dzi nkunyim aberbiara.
Na wɔbɛ pinanpinan yaayaa Ɔnam mframa dzendzen, Osuro nna nkunyimdzi eesuo gyedzi nye tsebowa pa a binom egyaa mu akyen egu esu wɔ gyedzi no ho no mu dzen. Nennkyerɛ ase, nye dɛ hɔn ensi hɔn gyedzi pi wɔ Ɛwuradze naasɛm mu wɔ Jesus Christ nebotan no do.
Paul hwehwɛ mu wɔ botan a Moses aber no do nsu fimu bae ma Israel mba no yaa binomee, no, wɔ dɛ botan no nye Christ.
Mo nua ɔbra ehum yɛ nokwar Sɛma ɔbɛba, na ɔyɛ Sunsum nepɛ, da kor anaa aber bi ɔbesi wo do. Ntsi Oye dɛ bɔboaboa woho na amiamia wontoboa mu na ahwɛ wonsu mu hɛn yie aama nsu ankɔ mu. Wimu hɛn Ka nyi pa biara ɔhwɛ ne hɛn no yie ansaana woetu.
Hwɛ wongo na gyedzi dɛ ɔdɔɔso wo ndzemba biara eyɛ no, hwɛ hu dɛ neyinara ayɛ pɛrpɛr. Nwoma Krɔnkrɔn ka kyerɛ hɛn dɛ onyansafo biara hwɛ nakwan mu yie. Yɛ iyi wɔ aber a ewia rehyerɛn yi, akwantu mu anaa biribiara a ewɔ ho kwan dɛ eyɛ no. Jesus dɛ obotua hɛn ho kaw, weɔn na sɔl!
Owura George Leon Pike, Sr.
Dɛm krataa yi wɔdze kyɛ kwa. Sɛ epɛ no pii a ɔno kyerɛw kɔ adrɛs a ɔwɔ ase ha yi.
FAN9910T • FANTE • LIFE’S STORM
Ahotsewee Nke Ɛworadze